किन हुन सकेन संविधान संशोधन ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बीचमा ९–९ महिना सत्ताको बाग्डोर आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो ।
साथै स्थानीय चुनाव प्रचण्डजीले गराउने र बाकी दुई चुनाव देउवाजीले गराउने सहमति भएको थियो । हामी भित्री कुराको ठोस प्रमाण दिन नसकौंला, तर सहजै अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने प्रचण्डजीको म्याद चैत्र मसान्तसम्म थियो । यहीबीचमा प्रचण्डजीले चैत्रमा स्थानीय चुनाव नगरी सत्ताको बाग्डोर नसुम्पनने कुरा देउवालाई सुनाएको हुनु पर्दछ ।
अनि देउवाजीले पनि चैत्र मसान्तसम्म दिएको म्याद बढीमा एक महिना थप्न सहमत हुनु भएको होला ।
त्यसको मतलव हो देउवाजीले प्रचण्डजीको म्याद एक महिना आर्थात बैशाख मसान्तसम्म थप्नुभयो । अनि प्रचण्डजीले वैशाख ३१ का दिन स्थानीय चुनाव गर्ने घोषण गर्नुभयो ।
यसमा मोर्चाको सहमति वा असहमतिभन्दा पनि देउवाजीलाई सत्ता आफ्नो हातमा चा“डै आओस् भन्ने मनशायले नै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएको हुनु पर्दछ भने कुराको आकलन गर्न धेरै गाह्रो छैन । नेपाली जनता भ्रममा नपरे हुन्छ बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हनेवाला छैन ।
प्राविधिक, राजनीतिक, कानूनी, साधन श्रोत र स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा भएका ढिलाई आदि कारणले यो संभव छैन । र त्यसै पनि उक्त मितिमा निर्वाचन गराउने कसैको चाहना पनि छैन । केवल सत्ताको भागवण्डाको खेलमा नेपालको राजनीतिको चुरो अड्किएको छ ।
मलाइ लाग्दछ. २०७४ माघ ७ अघि अन्तिम क्षणमा आएर राजनीतिक दलहरुले एउटा कुनै निर्वाचन गराउने सम्भावना छ, र त्यो धेरै सम्भव छ संसदीय निर्वाचन नै होला ।
एउटा निर्वाचान गराएको वैधतालाई टेकी संविधान संसोधन मार्फत २०७४ माघ को समय सिमा पर धकेलिन्छ । यसमा खासै कुनै दलको पनि धेरै विमति नरहला । त्यस वेला, का“गे्रस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रीक सबैै सरकारमा संगै हुने छन् ।
नया“ संविधानविरुद्ध आन्दोलनरत संयुक्त प्रजातान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संसदमा टेबल भएको संविधान संशोधन विधेयक अब लावारिश भएको छ । मधेसी मोर्चा तीन बूंदे सम्झौतापछि यो सरकारस“ग आन्दोलनको रकम भुक्तानीमा व्यस्त भयो ।
कहै छैय, बुढिया माडे त्रिपित । र यी तीन ठूला दललाई त संविधान संशोधन चाहिएकै छैन । त्यसमा पनि मोर्चाका क्रान्तिकारी योद्घहरुले संसोधन प्रस्ताव भित्र स्वीकार गर्ने र बाहिर परिमार्ज गरे मात्र स्वामित्व लिने घोषणाले तीन दललाई के खोछे कान आ“ख भने झै“ भयो ।
यसकारण संशोधन प्रस्ताव भयो लावारिस हुन गयो । यही प्रस्ताव पास हुने लक्षण नभएको ठाउ“मा परिमार्जन सहित पास गराउन त के सकिन्थयो ?
संविधान संशोधन गराउने थोरै पनि इच्छा भएको भए प्रचण्डजीको सरकार बन्दाखेरि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउनका लागि गम्भीर प्रयास हुन्थ्यो, किनकि त्यसले गर्दा संविधान संशोधनको लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मतको पक्षमा एउटा सकारात्मक माहौल तयार पाथ्र्यो होला ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई कमल थापा सरकारमा आए आफू मर्यादाक्रममा दुई नम्बरमा पर्ने भयले उनले कमल थापालाई सरकारमा आउन दिएनन् । अर्कोतिर देउवाजीलाई पनि परराष्ट्र मन्त्री यस म्यान चाहिएको थियो । गच्छदार सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका थिए ।
उनको लागि मधेसी मोर्चा तगारो भयो । यही“बाट तुहियो संविधान संशोधन हुने थोरैमात्रको सम्भावना ।
विहेमा निम्तो नदिनेको मलामी किन जान्थे कमल थापा र विजय गच्छदार ’ सरकार ढल्ने बेलामा अब अहिले सरकारमा आएर कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार किन संशोधन विधेयकमा भोटिङ गर्थे? बरु यी तीन ठूला दल लडे भने प्रधानमन्त्रीको पद उछिट्टिर आफ्नो पोल्टामा आइपर्ने हो कि भन्ने आश थापाले गर्नु स्वाभाविक हो ।
"मधेसी मोर्चा तीन बूंदे सम्झौतापछि यो सरकारस“ग आन्दोलनको रकम भुक्तानीमा व्यस्त भयो । कहै
छैय, बुढिया माडे त्रिपित । र यी तीन ठूला दललाई त संविधान संशोधन चाहिएकै छैन । त्यसमा पनि मोर्चाका क्रान्तिकारी योद्घहरुले संसोधन प्रस्ताव भित्र स्वीकार गर्ने र बाहिर परिमार्ज गरे मात्र स्वामित्व लिने घोषणाले तीन दललाई के खोछे कान आख भने झै भयो ।"
यसकारण संविधान संशोधनको थोरै पनि सम्भावना अब समाप्त भएको छ । फेरि शुरु भएको छ सत्ताको लडाईं । अब देउवाजीले प्रचण्डजीलाई बैशाखमा प्रधानमन्त्रीको पद छोड्न भन्नुभयो भने उहा“ले एमाले र कमल थापाको सहयोगमा भदौसम्म प्रधानमन्त्री बनिरहनुहुनेछ । देउवाजी जिल्ला पर्नुहोला ।
उता भो गठबन्धन नटुटोस भनेर एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुनुभन्दा बरु यही गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहोस् भनी देउवाजीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनिरहन दिने सम्भावना पनि छ । होइन भने प्रचण्डजीले एमाले र राप्रपास“ग नया“ गठबन्धन कायम गर्ने डर कांग्रेसलाई देखाउने सम्भावना छ । उता ओली र देउवाको नया“ गठबन्धनको झिनो सम्भावना पनि कायम छ ।
यी केही सम्भावनाका काुराहरु हुन । यही होला भन्न त गाह्रो छ किनभने नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो प्रतिबद्धतामा कायम रहेको उदाहरण छैन । तर यी सबै कुराहरुको मतलव स्पष्ट छ, संविधान संसोधन हुने संभावना न्युन भएको छ ।
तीन ठुला दलले निर्वाचन पेलेर गराउन सके भने संविधान संसोधनको बिषय एक दशकका लागि पछाडि धकेलिन्छ र संभवत अहिलेको राजनितिक राप र तापको माहोलमा नहोला पनि । हुनलाई सप्तरी राजविराजको घटनाले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने लगभग पक्का भएको छ ।
एमालेले पनि मधेसको भावना के रहेछ भने राम्रैसंग बुझे होला भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने २ न प्रदेशमा मेची महाकाली अभियान स्थगित गर्न बाध्य भयो ।
अर्को एमालेको रणनिति के देखिन्छ भने यदि स्थानीय तहको निर्वाचन पेलेर पनि गर्न सकियो भने संविधान संसोधनको कोर्स निर्वाचनसंगै समाप्त हुन्छ । फेरी त्यही संसोधन गराउन पनि नँया खालको राजनितिक आन्दोलनले मात्र संभव हुन्छ । जस्को जग बसाल्न बर्षौ लाग्न सक्छ ।
यसकारण सिमांकन परिवर्तन सहितको संविधान संसोधन अभी नही तो कभी नही भने बुझी राखे हुन्छ ।